Zvakavanzika zveSalon Bhizinesi: 10 Inogoneka Kushambadzira Pfungwa Dzinogona Kukubatsira Kuchengetedza Mamwe Maklayenti | Martech Zone
China, Kurume 14, 2019 NeChishanu, Kurume 15, 2019 Suzy Viola
Salons inodyara yakawanda munzvimbo yavo, vashandi vavo uye nyanzvi, zvishandiso zvavo, uye zvigadzirwa zvavo. Nekudaro, chinhu chimwe chavanowanzoregeredza kuisa mari mavo mushandirapamwe wekushambadzira. Sei vatengi vachigona kuwana yako inonakidza salon neimwe nzira?
Kunyangwe kushambadzira kuchigona kuve chinhu chinonyengera kugona, ichiri kugoneka, uye hapana chikonzero chekutyisidzirwa. Kune akawanda mazano ekutengesa akaedzwa uye kuyedzwa salons anoshanda nemazvo mukukwezva vatengi uye nekuvandudza kuchengetedzwa kwevatengi.
Kana iwe uri muridzi wesaroni ari kunetsekana achitarisa kuwedzera zvirongwa zvavo zvekushambadzira, wobva waverenga kuti uwane kuti ndeapi mazano ekushambadzira aunogona kuita kuchengetedza vatengi vazhinji.
Govera kurevera-shamwari-chirongwa - Imwe nzira yekuwedzera huwandu hwevatengi vako ndeyokushanda pamwe neaya watove nawo. Unogona kunge uchinetseka kuti sei. Zvakanaka, kuburikidza nechirongwa chekutumira hazvo. A chirongwa chekuendesa chirongwa chakanangana nevatengi vako varipo. Iri zano rekushambadzira rinokurudzira vatengi vako kuti vaendese shamwari ku salon yako nekuvapa izvo zvakadzoserwa kune imwe neimwe inobudirira kutumira kunoitwa. Chinhu chakanaka pamusoro pechirongwa chekutumira ndechekuti vanhu vanowanzoita pane chekutumira pane kutonhora kufona kana email kubva kwauri. Kana kurudziro ikauya kubva kune anovimbika uye sosi yepedyo, iri mukana wekugamuchira kutariswa kwevatengi vatsva Vanotumirwa vatengi vanowanikwa vakavimbika kupfuura zvakajairika vatengi. Chimwezve chekuwedzera ndechekuti ivo vanogamuchira zvakanyanya kushandisa yako salon zvigadzirwa uye masevhisi.
Fomu kudyidzana nemamwe mabhizinesi - Kune nzira dzakawanda munhu dzaanogona kugadzira neiri bhizinesi. Imwe nzira yekuve pamusoro pemakwikwi ndeyekushandira pamwe nemamwe mabhizinesi. Kazhinji kazhinji isu tinoregeredza kugona kwekubatana nemamwe mabhizinesi uye nemabatiro aingaite kutyaira kwakawanda traffic uye mari kune ese ari maviri ebhizinesi rako. Sesalon, unogona kubatana nemabhizinesi mazhinji. Zvichienderana nenzvimbo, iwe unogona kushandira pamwe nemabhizinesi ari zvakare mune yeindasitiri yekunaka newe. Semuenzaniso, unogona kubatana nenzvimbo yako yaunofarira kukwiza muviri, kana kuti pamwe unoda kubatana ne spa. Uine zano rekushambadzira iri, unogona kupinza kwete chete kune vako vatengi asi kune rimwe bhizinesi 'vatengi zvakare. Ichave yekuhwina-kuhwina mamiriro kune ako ese mabhizinesi pamwe nevatengi futi nekuda kwema dhiri aari kuwana.
Govera kukwidziridzwa kwesalon - Ndiani asingade kudzikisira? Ichi ndicho chikonzero kudzikisira, kutengesa, uye kushambadzira zvinogara zviri nguva-yakaedzwa yekutengesa chirongwa chinoshanda nemazvo kune chero bhizinesi. Kushambadzira kwako kwekutengesa kunogona kuvimba nezvakawanda zvinhu. Inogona kunge iri yekutanga-nguva vashanyi, kana pamwe kune mamwe mazororo. Zvichida iwe unogona kunyange kuseta-pasa yezuva rekubhadhara kana kutengesa kwevhiki. Ne kukwidziridzwa kwesalon, iwe unogona kuwedzera traffic kune yako salon uye wedzera kubhuka. Ehezve, kana iwe uine kuwedzera kwekubhuka, zvakanyanya mukana kuti iwe ugadzire kutengesa kuitira kuti kunyatsoitwa salon kusimudzira kunogona kusimudzira mari zvakare.
Shandisa kushambadzira midhiya yenhau - Nharaunda yerunako iri kubudirira pasocial media nguva pfupi yadarika uye zvakakosha kuti varidzi ve salon vashandise izvi. Nguva dzose gadzira account yemagariro esalon yako kuti iite kuti zvive nyore kuti saloni yako iwanikwe nevateveri vanofarira. Paunenge uchinge uine account inoshanda pane akasiyana masocial media mapuratifomu, usakanganwa kushambadzira rako bhizinesi. Chinja kushambadza kwako uye magariro ekushambadzira munharaunda zvichibva papuratifomu yega yega kune yakasarudzika ruzivo kune vashandisi. Tora mukana wepamoyo-wakagovaniswa kugovana chikuva che Instagram uye utumire anotaridzika anotaridzika kuti atariswe nevatengi vanofarira. Gadziridza ma hashtag uye mazwi akakosha kuitira kuti iwe uwane mhando yekutarisisa.
Wana zvimwe zvakabatana kuburikidza nekutengesa email - Kana zvasvika pakushambadzira bhizinesi rako pamhepo, usaregeredze kushambadzira bhizinesi rako kuburikidza neemail-based mishandirapamwe. Izvi ndezve kufukidza vatengi vasingateedzere ako enhau enhau maakaundi asi vakapa yavo email kwauri. Iyo bhenefiti yekushandisa email kushambadzira mushandirapamwe ndeyekuti iwe unowana yakawanda mhedzisiro pamutengo wakachipa. Zvakare, iwe unogona kushandisa kushambadzira kweemail kuti uite mamwe emazano ekutengesa akambotaurwa. Semuenzaniso, unogona kutumira maemail ane zvakabatanidzwa zvekutumira zvinongedzo kukurudzira vatengi kuti vaendese shamwari yavo pamutengo. Iwe unogona zvakare kukurudzira kutengesa kana kusimudzira kune vasingazive vatengi kuburikidza neemail yavo. Zvese izvi nezvimwe zvinogona kuitwa kuburikidza neemail uye iwe unogona kukwidzirisa maitiro aya nekushandisa a saloni yekuverenga manejimendi system.
Shandisa kuronga software -Kushandisa kuronga software kunyorera maappointions pasalon yako kunogona kubatsira kugadzirisa maitiro uye kuita kuti zvive nyore kuronga kuwanikwa kwevashandi vako nevatengi vako. Pane zvakawanda zvinoitwa nevatengi nevashandi kuti vatore mukana wavo kana vachishandisa iyi software. Chimwe chinhu chinoita kuti kubhuka musangano kuve nyore ndeye-chaiyo-nguva kalendari inogadziridzwa iyo vatengi vanogona kuona online. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kune vatengi kusarudza kana vachida kuronga nguva yavo yezvekurapa kwavo kwavanoda. Kunze kweizvozvo, kuronga software kunogona kuyeuchidza vatengi vako nezvemaitiro avakaisa pasalon yako. Kana vatengi vachifanira kukanzura, zvirinani kuti iwe hauzoziviswa pazuva re. Izvi zvinogona kukutendera iwe kusunungura iyo nguva yekugamuchira imwe musangano.
Joinha zviitiko zvemuno - Chinhu chimwe icho akawanda masalon haashandise nharaunda yemuno. Iwo akanakisa salons ane imwe mhando yehukama nenharaunda nekuti, mushure mezvose, ndipo panobva vazhinji bhizinesi ravo. Ichi chikonzero nei masalon achifanira kuita zvese zvavanogona kuti vapinde muzviitiko zvemuno. Kunyangwe zviitiko zvacho zviri zvemazororo kana pamwe zvemafashoni, kungoratidza rutsigiro rwako kunogona kuita kuti rako bhizinesi 'zita ripararire ipapo uye riwedzere vatengi vako.
Dzorera kunharaunda yako - Kutaura nezvekujoinha pane zviitiko zvemuno, imwe nzira yekuita hukama nevagari ndeye kudzorera kunharaunda. Pamwe bvunza vakuru vemunharaunda nezve nzira dzaungabatsire nharaunda. Zvichida iwe unogona kupa mahara bvudzi kune vasina pekugara. Pamwe iwe unogona kubatsira kubhadhara chiitiko cherudo chiri kuitika mune ramangwana. Iyi inzira yakanaka yekudyidzana nevatengi vangangoita vatengi izvo zvinopisa moyo.
Tora yako salon yakanyorwa mumadhijitari epamhepo - Ongororo dzichangoburwa dzakaratidza kuti vazhinji vevashandisi venhare vanotsvaga bhizinesi pamhepo kana chigadzirwa online vasati vashanyira chitoro. Ichi chikonzero nei uchifanira kuita kuti bhizinesi rako riwanikwe uye riwanikwe sezvinobvira. Imwe nzira yekuita izvozvo ndeyekunyora bhizinesi rako pamadhairekitori epamhepo senge paYelp kana paGoogle Bhizinesi. Nenzira iyi, vafundisi vanofarira vanogona kuwana nyore yako salon uye voona ako ekuvhura maawa uye masevhisi aunopa.
Ita mashandisirwo ekushambadzira zvekare kushambadzira - Kana mutengi angoshanyira yako saiti, angave kana kwete ivo vanoguma nekutenga, zviri nyore kuvaita vatendeuke kupfuura vatsva vatengi vasina kumbobvira vayanana neako brand zvachose. Kuti utore mhando dzevatengi idzi, zvakanakisa kushandisa kudzoreredza kushambadzira. Kana iwe uchangobva kuvhura chigadzirwa chitsva kana kurapwa, wobva watarisa runyorwa rwevatengi vekare avo vanogona kunge vachifarira mavari uye tarisa kwavari nezvishambadziro zvezvakataurwa chigadzirwa / kurapwa.
Kushambadzira yako salon hakufanirwe kureva kushandisa hombe mabhuru pamabhodhi kana kutumira maflaya kutenderera guta. Kune akawanda anoitika ekushambadzira mazano iwe aunogona kuita nhasi.
Izvo zvese ndezvekutaurirana neyako musika mushe pamwe nekuvhura yako salon kumusoro kune yemunharaunda nharaunda. Usamirire kwenguva refu usati watanga kushandisa aya marongero ekushambadzira kuitira kuti iwe ugone kuagonesa kuti ave akatonyanya kuita nekukurumidza sezvazvinogona.
Tags: Email Marketingzviitiko zvemunokushambadzakudzokera shuresalonkushambadzira kwesalonkuronga softwareSocial Media Marketing
Suzy Viola inyanzvi yezvekushambadzira midhiya uye mutori mifananidzo. Iye anoda kugovana ruzivo rwake uye zvido kune wese munhu izvo zvinomutungamira kuti ave anoshanda akazvimirira munyori. Uye Oh! Iye mufambi zvakare.
10 Anoshamisa Zvemukati Kunyora Maturu Ekushamisa Kushambadzira